"Despacito", nguLuis Fonsi kunye noDaddy Yankee, sele iyingoma edlalwa kakhulu kwimbali | Iindaba zeGajethi
Kulabo abathe ngomhla wabo bakhalaza ukuba ingoma ethi "Ukuxhoma ezandleni zakho" nguCarlos Baute noMarta Sánchez, okanye "isitayile seGagnam" yiPSY yaseMzantsi Korea yaphuma nokuba sele kumhluzi, awuyazi into ekulindeleyo i "Despacito" nguLuis Fonsi kunye noDaddy Yankee osandula ukuba ingoma edlalwa kakhulu ngalo lonke ixesha Kwaye okona kubaluleke kakhulu, akukho siphelo sisondeleyo kule nto.
Ngokwengxelo epapashwe leli phephandaba Guardian, ULuis Fonsi kunye noDaddy Yankee bafikelele encotsheni yeetshathi kwihlabathi liphela ngengoma yabo Despacito yintoni nge I-4.600 yezigidigidi zokujongaSele iyingoma ephulaphulwayo embalini, iiveki ezilithoba zilandelelana nenombolo enye e-United Kingdom, kwaye uye washiya uJuntin Bieber, abo baphinde bayixube le ngoma kwindawo yesibini.
1 Kancinci ukuba ube yimpumelelo enkulu kwimbali
2 Eyona mpumelelo inkulu ngeSpanish ukusukela ngeLa Macarena
Kancinci ukuba ube yimpumelelo enkulu kwimbali
Ukusukela ukuba ikhutshwe kwihlabathi liphela ngoJanuwari ophelileyo, isekude nexesha lethu lasehlotyeni nakwiholide, ingoma kaLuis Fonsi kunye noDaddy Yankee "I-Despacito" iqokelele i-4.600 yezigidi zokujonga kwihlabathi jikelele ngaloo ndlela ukufezekisa isihloko sengoma edlalwa kakhulu ngalo lonke ixesha. La manani akwabandakanya i-remix yengoma ekhutshwe bobabini ngabaculi baseCanada u-Justin Bieber ngo-Epreli ophelileyo, uguqulelo ulutsha, hayi ulutsha kwihlabathi liphela, luyanyibilika ngolonwabo ngalo lonke ixesha beluphulaphula.
Iimbono zehlabathi jikelele ze "Despacito" zibandakanya "onke amaqonga aphambili," kubandakanya iSpotify kunye neYouTube, ngokolwazi ipapashiwe nguMgcini.
Ukuza kuthi ga ngoku, ingoma ebambe le rekhodi yokusasaza imveliso yayiyingoma ethi "Uxolo" ukusukela ngo-2015 ngu-Justin Bieber, ene-4.380 yezigidi zokuphinda uvelise, ke lo mzobi ngoku ufuduselwe kwindawo yesibini.
Uninzi lokuveliswa kwakhona kwe «Despacito» zivelisiwe kwiqonga levidiyo I-YouTube, apho ividiyo yoqobo sele iqokelele ngaphezulu kwe-2.600 yezigidi zemidlalo, Ukuvuka, ngelixa ijelo elisemthethweni U-Luis Fonsi uqokelela ngaphezulu kwe-400 yezigidi zokuhambisa. Kwaye ngokolwazi olupapashwe ngumphakathi I-Business Insider, kwiSpotify iingoma ziqokelela itotali edibeneyo ejikeleze ibhiliyoni yokuvelisa kwakhona.
Ngokwengxelo eyenziweyo kwiphephancwadi eyaHlukeneyo nguLucian Grainge, umongameli weUniversal Music Group, i-emporium esebenza kuyo iirekhodi ezininzi, ukusasaza kuye kwandise amathuba okuba “ingoma enesingqisho esahlukileyo, isuka kwinkcubeko eyahlukileyo nakulwimi olwahlukileyo. ukuba sisilo sempumelelo kwihlabathi liphela.
Eyona mpumelelo inkulu ngeSpanish ukusukela ngeLa Macarena
Ewe, ukusasaza okunjalo ibe sisixhobo esiye sanyusa kwaye sakhawulezisa iihits ezinje ngo "Uxolo" nguJuntin Bieber okanye lo "Despacito" nguLuis Fonsi kunye noDaddy Yankee. Kakhulu kangangokuba UDespacito wophule irekhodi kwiinyanga nje ezintandathu. Ke, ingoma iyinyani kwaye ayinakuphikiswa impumelelo yomculo kwihlabathi liphela, kodwa ukubaluleka kwayo kunye nentsingiselo iya ngaphaya kwamanani entengiso abonwa njengamanani awodwa: IDespacito yingoma yokuqala enamazwi eSpanish ukufikelela kwindawo yokuqala kwiBillboard Hot 100 ukusukela ngo1996, unyaka apho isibini seSevillian iLos del Río saphumelela ngo "Macarena", ingoma eyahlala kweso sikhundla iiveki ezilishumi, yayisisandi somkhankaso wokhetho lukaBill Clinton kwiNdlu yeWhite House, kwaye nanamhlanje, kwiminyaka engama-21 kamva, iyadlalwa kuthotho lwakutshanje njenge “Amigos de Universidad” Ukusuka kwiNetflix.
Ukongeza, le ngoma yafumana ukutyhala okwesibini kunye nokukhulu, ngakumbi e-United States, xa uJustin Bieber wongeza intsebenziswano yakhe, ngaloo ndlela ebonisa amandla akhe okuphumelela.
Kwaye ngoku, ndikushiya ngengoma, unganakho ukuqikelela ukuba yeyiphi ngaphambi kokujonga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » "Despacito", nguLuis Fonsi kunye noDaddy Yankee, sele ingoma edlalwa kakhulu kwimbali
Ayisi-4,6 trillion, ziibhiliyoni ezi-4600 okanye iibhiliyoni ezi-4,6.
NgeSpanish, isigidi sezigidi sisigidi.